Mayelana Nathi, I-Threaded Embroidery, I-Polyester Yokuhlunga Indwangu Yokwakhiwa
I-NINGBO MH YARN AND FACTORY is a facotry eyodwa ye Ningbo MH Industry Co., Ltd. Ithas igxile ekuthungeni intambo nokudayiswa kwentambo ye-12 iminyaka. Manje i-MH inezindawo ezintathu zezimboni ne-120,000m2 plant plant, abasebenzi be-1900, kanye ne-equippte enomshini ophezulu kanye nokuphathwa okuqinile kwezokukhiqiza, singanikeza amakhasimende ngekhwalithi ephakeme nokuthembeka.
Inqubo yokukhiqiza i-MH ye-Sewing Thread Industry kuhlanganisa: ukugaya izinsimbi, ukugaya, ukukhipha, ukupakisha nokuhlola. Umthamo wokukhiqiza wonyaka yi-30000 + ithoni. Umkhiqizo wethu kufaka phakathi i-spun ne-polrespect ye-corespun eziboshwe nge-nylon kanye ne-polyester braids, etholakala ngobukhulu obuhlukile kanye nokucaciswa ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zamakhasimende. Imfucumfucu ye-MH yokuhlinzekwa kwabakhiqizi bomhlaba bezingubo, ukulala, ikhabethe, imfashini yasekhaya, izimboni, ukupakisha kanye neminye imikhiqizo ecwebezelwe emhlabeni wonke, yokwamukelwa kabanzi ngamakhasimende omhlaba wonke onekhwalithi ephakeme emncintiswaneni wokuncintisana.
I-MH ye-Embroidery Thread Industry ine-line ephelele yokukhiqiza ukuhlunga, ukugaya, ukubunjwa nokubunjwa, okuqinisekisa ukukhiqizwa okufike ngesikhathi nekhwalithi enhle kakhulu ukukhiqiza i-rayon embroidery ngentambo kanye ne-polyester embroidery thread, amandla ethu okukhiqiza ngonyaka yi-10000 + ton. Ukuphakama okukhulu, ambalwa okuhlangene, umbala omuhle, isibambo esincane nokukhawuleza kombala yilokho esikunikezela kumakhasimende.